Ku saabsan "si dhaqso ah" iyo cawaaqib xumada ayaa loo sheegay filimka cusub ee Cannes Film Festival
Cannes Film Festival ayaa si macquul ah loogu yeeri karaa ma aha oo keliya dhacdada dhaqanka ee ugu weyn, laakiin sidoo kale waa mid moodi kara. Dhamaanba, roogga cas cas ee dhacdadan ka hor xafladda furitaanka waxay noqoneysaa xayawaan dhab ah, taas oo ah haweenka ugu quruxda badan, qurxinta, farshaxanka iyo dumarka sharafta leh ee nacasta adduunka ee ka baxsan couturiers caanka ah iyo caalamka. Dhamaan Fashion Week kasta waxay ku faani kartaa sida bandhig weyn oo heer sare ah ee kubadda cagta Haute.
Si kastaba ha ahaatee, sanadkaan martida Cannes ayaa arki karta ma aha oo kaliya raaxada iyo raaxada casriga ah ee casriga ah, laakiin sidoo kale dib u noqosho - ma aha mid aad u soo jiidasho leh. Waxay ku saabsan tahay fasale degdeg ah. Haa, waxaa jira erey noocaas oo kale ah ee adduunka moodada ah, waxaana macnaheedu yahay fikrad aan ka yareyn wax cabsi badan oo cabsi leh marka loo eego cuntada degdegga ah. Xilliga xafladaha, ayaa dukumiinti ku saabsan habka dhakhso ah ee loo yaqaan "True Price". Sawirku wuxuu ka hadlayaa qiimaha ay bixiso dadka saboolka ah ee wadamada Afrika ah fursadda kuwa taajirsan iyo caanka ah in ay xirtaan noocyo kala duwan oo caan ah, si faa'iido u leh shirkadaha moodada ah, dharka jaban ee dadka deggan dalalka horumaray.
Waxaan ka hadlaynaa dalalka ugu saboolsan adduunka, halkaas oo maanta ay tahay inta badan shirkadaha waaweyn ee dharka waaweyn, dharka, dharka, qalabka. In la raadiyo shaqaale raqiis ah, noocyada adduunka ayaa si buuxda u buuxsamaya qaaradda madow. Dhab ahaantii, ma keenin xitaa dakhliga ugu yar ee qoysaska shaqaalahooda ah, oo u dhigma pennies ka shaqeeya qoyaanka, wasakhda, dhismayaasha gurmadka, marmarka qaarkood xataa halis galinaya noloshooda. Nasiib darro, shaqaalahan, hawsha filimka ee naqshadayaasha caanka ah iyo kuwa caanka ah, kaliya Stella McCartney iyo wakiillo ka mid ah magaca Patagonia ayaa qayb ka ahaa.
Alessandra Ambrosio waxay sii wadi doontaa balaarinta waxqabadyada astaantiisa
Noocyada iyo qiyaasta ayaa lagu soo oogay sawirada sawirada waxayna kasbadaan khafiif
Ciraaq, bandhig bandhig ah ayaa la qabtay. Markii ugu horeysay 30 sano
Dukaankii ugu horeeyay ee munaasabada Islaamka ee London ayaa la furay
Xaaladda dhaqaaluhu waxay ku xidhan tahay timaha casriga ah
Ode ilaa Hooyo laga bilaabo Dolce & Gabbana ee Week Fashion Week Milan
Pizza leh baradho iyo buro
Sida loola tacaalo calaamadaha cudurka quudinta habeenkii
ICHIKAMI - quruxda dabiiciga ah
Daryeelka mashiinka dharka
Laga soo bilaabo Dana Borisova ninkeeda ayaa ka cararey "Mercedes"
Jimicsiyada loogu talagalay qaab nololeed caafimaad leh
Sida loo kariyo cuntooyinka delicious ee qoyska
Maxaa dhacaya haddii aad la kulantid laba wiil?
Yareynta kolestaroolka daaweynta dhiigga
Daweynta neefta ee bariga ah
Saamaynta daaweynta dhoobada jirka jirka
Shukumaan sonkor ah
Macmacaanka shukulaatada shukulaatada
Saamaynta jirdhiska jirka ee koritaanka maskaxda ee carruurta
Pesto ee Sicilian